I-CodeGuard: UkuGcina iwebhusayithi kwiMafu Martech Zone
Malunga nonyaka ophelileyo, sasibizwa ngumthengi kwaye babethabatheka. Bacime umsebenzisi kwinkqubo yabo kunye naloo msebenzisi ngumnini wonke umxholo ke umxholo wawususwa nawo. Umxholo wawungasekho. Iinyanga zomsebenzi ukuzalisa indawo… zonke zihambe ngentliziyo. Ukuzibandakanya kwethu yayikukwakha umxholo wabo, hayi ukulawula ukusingathwa okwenyani kunye nokuphunyezwa. Ngenxa yoko, sasinogcino lomxholo kuphela… umxholo olahlekileyo wagcinwa kwindawo yogcino lwedatha. Ewe, babengenayo indlela yogcino lwedatha okanye inkampani yabo yokubamba.
Ukusukela ngoko, siqinisekile ukuba, ngaphandle kokuzibandakanya kwethu nomthengi, ukuba kufanelekile ukhuseleko kunye ne-backups ziyafumaneka kwindawo yazo. Uninzi luxhomekeke kwiqela labo le-IT okanye ukusingathwa… kodwa sihlala sifumanisa ukuba ezo backups zikhawulelwe kwifayile okanye kwidatha- kodwa ngokufuthi ayizizo zombini.
CodeGuard ibonelela ngesisombululo esizenzekelayo sokugcina iwebhusayithi ngeSoftware njengeNkonzo, kwaye yenza umlingo ubonakale! Nguye osemva kwesigcawu ojonga ngokungakhathali indawo yakho kwaye aqiniseke ukuba ikhuselekile. Ukuba i-CodeGuard ifumana naluphi na utshintsho kwindawo yakho, iya kuthatha i-backup entsha kwaye icime i-imeyile ngokukhawuleza kuwe.
Sombulula iingxaki ngokukhawuleza -Ukusebenzisa iCodeGuard yoTshintsho oluLumkisayo, uya kulinciphisa ixesha elingenakubhatalwa elichithwe kuchonga oonobangela bemicimbi eyenziwe ngabaxhasi bakho. Ngonqakrazo olunye ukubuyisela, uya kulinciphisa kanobom ixesha elifunekayo ukulungisa le micimbi, emva kokuba kufunyenwe oyena nobangela.
Khusela abathengi bakho Rhoqo, abathengi lolona tshaba lwabo lubi bengakhange baqonde. Inyaniso elusizi yeyokuba ukususwa kwefayile, ukubhala ngaphezulu, kunye nephutha lomntu elilula kubangela iingxaki ngakumbi kunezigebenga ezinobungozi kunye nokufakwa kwe-malware. NgeCodeGuard, unokukhusela abathengi bakho kubo.
Khusela umgca wakho osezantsi -Thintela iindleko ekuphumeni kolawulo ngokumisela uxanduva olucacileyo nobunini bemiba abathengi bakho abakuxelela yona. Guqula iiyure ezingabhatalekiyo zibe ngumsebenzi onenzuzo ngokufumana isivumelwano somthengi sokuba ulungisa imiba eyenziwe ngaphandle kolawulo lwakho.
Yandisa ingeniso yakho -Yongeza ingeniso eyongezelelweyo kwishishini lakho elingasokuze likuyeke. Ukuthengisa kubathengi kulula. (i) Yenza isebenze ngokulula iwebhusayithi xa uqala ukuyakha okanye ufuna ukwenza uhlaziyo. (ii) Yongeza i-CodeGuard njengento yomgca, kwaye ukuba iyafuneka, bonisa umxhasi wakho ividiyo yethu ukuba achaze ukuba kutheni eyifuna.
I-CodeGuard isebenzisa iqonga lobuchwephesha be-agnostic ukwenzela ukuxhasa uluhlu olubanzi lweenkqubo zolawulo lomxholo kunye nokusetyenziswa. Oku kuvumela iCodeGuard ukuba igcine phantse naluphi na uhlobo lwesiza okanye isiseko sedatha, kubandakanya iWindowsPress, iJoomla!, Magento, Drupal, phpBB kunye neMySQL.
tags: backupzi cwangcisoikhowudii-wordpress i-backups